SIR Culus: Puntland ma Abeeso xanbaar baa!
Posted to the AllPuntland.com November 14, 2001
Deeq Siciid Maxamuud
Waxaa Magaalada London waqtii hada laga joogo ugu jaraan Sanad ka dhacay Shir ay Al-itixaad(kooxda carte) ku raadinayeen Ninkii badali lahaa Cabdulaahi Yuusuf waxayna u soo xilsaaren arinta Ninka la yiraahdo Maxamed Sheikh oo ka tirsam Lacag xawilayaasha London jooga iyo Ururada Diiniga ah ee kajira Londan isagoo wada Lacag aad u faro badan wuxuuna halkaas kula kulmay sedex Nin oo kalo ah
Jamac Cali Jamac , Siciid Farax Yare oo BBC_ da ka shaqayn jiray , Cabdi salaad oo hada ka hor Hindi qunsul ka ahaan jiray
Waxuuna si toosa ugu sheegay in uu raadinayo Nin ay Al_Itixaad oo u xuubsibtay Carte maalgalinayaan oo Cabdulaahi badala iyo in Odayaal Dhaqameedyo badan iyo Siyaasiyiin badan oo jooga Puntland arintaa laga dhaadhiciyey sugayaana in sedexdooda midkood iska doortan, wuxuuna isla markaa Carabka ku dhuftay in ay si gaara u danaynayaan Jamac Cali Jamac in ay doortan, iyo in labada kale jago wayn lagasiin doono Dowlad Xamaar hadii ay ku taageeran Ninka la doorto.ridida Cabdulaahi.
Labadii Nin ee kale waa Siciid Farax yare iyo Cabdi Salaad way garteen in Ninka la raadinay yahay Jamac Cali Jamac wayna ogolaaden in ay doortan iyo in ay la sheqeeyan Jamac Cali Jamac.
Labadii nin ee ka tanaasuleen jagadaa waxaan filayaa in aanay kharash la´aan bixin in kasta oo ninka aniga sheekadaan ii sheegay uuna ii sheegin in ay labadaa nin qaateen wax Kharash ah , haddana waxaad garanaysaa in aanay Kharash la´aan bixin maxaa yeelay waxay wax ka abaabuleen Shirar beeleedyadii dibadaha ka dhacay ee wax lagu tilmaamay maamul Xumada Puntlad ka taagan looga hadlijiray internadkana lagu soo qori jiray , intuuna jamac cali jamac soomaaliya tagin.
Sidoo kale waxay shirkadaha Xawaaladu iyo Al_Itixaad(DKM) ay dibada iyo gudah somaliya ka bilaaben baadi goob faro badan oo looga dan lahaa in la helo dad badan oo ninkastaba isu haysto in isaga
Si gaara loo rabo.
Waxayna dibadaha oo dhan ku yeeshen rag Siyaasiyiin ah oo reer Puntland ah qaban qaabinayey Shir Beeleedyadii looga soo horjeedo Maamulkii Cabdulaahi Iyadoo Maqaaladii shirarkaa ka soo baxay u e kaysiiyey Sawirka Puntland in ay tahay meesha kaliya ee Soomaaliya dhib ka jiro.
Sidoo kale waxay si xoog leh abaabul iyo Laalush uga wadeen Kooxda Carte wadanka gudihiisa, Waxaanad arkaysay in Masaajid kasta oo wanka guduhiisa ah iyo dibadiisa ah laga waday kicinta dadka lagu kicinayey Mamulkii jiray .
sidoo kale waxaa iyana Afka kala furtay Radio_ha Carte(BBC_Laanta Afsoomaaliga) oo ka sheekayn jiray oo kaliya Dhibka ka taagan Puntland ., ilaa hadana aad dareemaysid in ay Dhan u janjeerto.
Sikastaba ha ahaatee way ku guulaysteen Kooxdii Carte in ay iyagoo adeegsanaya Qaybahooda kala duwan oo kala ah Kooxda Al-Itixaad , BBC_da Laant Afsoomaaliga iyo waliba Shirkadaha Xawaalada ee Carte in ay Puntland burburiyaan ,waxaana hadda uu Aduunkii 11 Sebtember ka dib is badalay oo aad arkaysid in aanay ururada Kooxaha Diiniga sida kan Carte aanay wax fursad Siyaasi ah oo danbe lahayn in ay Puntland faaraha u galiyaan Koox iyaga raacsan madaxna ka dhigeen jama cali jamac .
Waxay ku guulaysteen Kooxda carte qorshohoodii ahaa in ay Puntland Miska Siyaasada Soomaaliyeed ka tuuraan.
Waxaana Burburkaa dhaqsaha badan u suurto galiyey Kooxda Carte Ururka Al-Iixaad iyo Shirkadihiisa Xawaalad oo ku caan baxeen Nacaybka iyo Xalaalaysiga Dhiiga iyo Xoolahooda dadka reer Puntland oo Dhinaca iyo BBC da Laanta Afsoomaaliga oo noqotay Radio Carte oo dhinac kal e ah.
Waxaanan dareensanahay in tagidii Yuusuf Garaad uu tagay Puntland ka danbaysay Natiijada Shirka Garoowe iyo iyadoo aan filayo in uu ku dhiiri galiyey in wax kasta oo ka soo baxa Shirka Garoowe BBC_du buunbuunin doonto.
Xaqiiq waxaa ah in ay Kooxda Carte soo dhiseen Ururada iyo Shirkadaha Xawaaladaha ee Liiska argagixisada lagu daray oo dhinac ah iyo BBC laanta Afsoomaaliga oo dhinac kale ah.
waxaa iyaduna xaqiiq ah inay hada Puntland la wareegi rabaan sidaana Puntland ku noqonayso abeeso xanbaar
Deq siciid maxamuud